ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ (၂၂. ၁. ၂၀၁၉) | Pyithu Hluttaw
(က)-လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးဦးစီးဌာနမှ ကျေးရွာတွင်း ၄၀၀ ဓာတ်အားလိုင်းသွယ်တန်းရာတွင် ၁ မိုင် နှုန်းထားကို မည်မျှသတ်မှတ်ထားသည်ကို သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ခ)-နယ်စပ်ရှိတိုက်နယ်ဆေးရုံနှင့် ကျေးရွာများ လျှပ်စစ်မီးရရှိနိုင်ရန် သဖန်းချောင်း 33/11 KV3MVA ဓာတ်အားခွဲရုံမှ တဲကြီးကုန်း၊ သီးပင်ကျေးရွာအထိ 33 KV ဓာတ်အားလိုင်း ၁၄ မိုင်နှင့် 33/11 KV3MVA အား တည်ဆောက် ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဂ)-ပဲခူးရိုးမကိုဖြတ်၍ ဖောက်လုပ်ထားသော ကတ္တရာကားလမ်းမကြီးများ၏ လမ်းဘေးဝဲ/ယာတွင် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းမဟုတ်သော မြေသားတစ်ကြောင်းထိုးလမ်းများ ဖောက်လုပ်ထားခြင်း၊ ဖောက်လုပ်နေခြင်းများကိုတားဆီးရန် မည်သို့စီစဉ်ထားသည်ကိုသိလိုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဃ)-ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ စက်မှုဇုန်(၂)နှင်‌့ စက်မှုဇုန်(၃)နယ်မြေအတွင်းရှိ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသော စက်ရုံအလုပ်ရုံမြေနေရာရရှိရေး မည်ကဲ့သို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုခြင်းနှင်‌့စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်
(င)-ဘားအံမြို့နယ်အတွင်းရှိ အိန္ဒု-ဂျိုင်း-ကော့ကရိတ်လမ်းမကြီးအား အမြန်ဆုံးပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(စ)-၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးဥပဒေအား ခေတ်နှင့်လျော်ညီသော ဥပဒေအဖြစ် ပြင်ဆင်ပေးရန် သို့မဟုတ် အသစ်ရေးဆွဲရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း အကျဉ်းချုပ်